rafozan-doza | Aogositra 2009
Nahita tagy vaovao indray ah
Efa manomboka leo ve nareo? Tsy aleo ve tagy toy izay resaka politika tsisy farany sady mandreran-tsaina ity ee. Tsy hoe ratsy ny politika ary amporisihana mintsy ny firesahina azy @ itony sehatra itony fa mba hoe maka souffle kely aloha fa hoavy indray ny gidragidra adiseza ato ho ato.
Za aza mieritreritra fa tokony atao tradition @ blaogy @ izay itony resaka tagy tagy itony. Ohatra hoe isam-bolana asiana tagy vaovao foana. Na isan-telo volana fara faharatsiny. Mafinaritra ny milalao, sa ahoana? Rehefa lalao ahafahan'ny olona maro mandray anjara dia tagy izay.
Androany hariva sisa, ny ilay ora niandrasany ilay tagy milay be mikasika ny mombamomba anao. Efa bedabe izay tagy fampafantarana ny momba ny tsirairay izay ary mbola tsy vita aza ny sasany. Fa hoy aho hoe ity tagy iray ity angamba mba anisan'ny mamintina azy, hoe mahalaza zavatra betsaka.
Toy izao ary: mandehana ao @ http://www.mypersonality.info/ dia ataovy ilay personality-type test sy multi-intelligence test(*). Misy fanotaniana bedabe, mihoatra ny 70 ra tsy diso ah, valiana dia manome karazana diagnostika kely momba anao izy. Tena manampy bedabe hoy aho hahafantaranao ny momba anao. Genre hoe mahita an'ilay fanotaniana enao vao mieritreritra hoe ahoana tokoa moa izaho ity mikasika an'izao sy izao. Tsy mitsara izy an, hoe ratsy izao na tsara izao. Tsy manome torohevitra koa izy. Fa manampy hoy aho. Ka hoy aho hoe ataovy ilay test ee. Tsy manin na tsy atranganao @ blog aza ny valiny fa izay no maha tagy mahafinaritra azy. Tsy voatery, fa ze tinao ihany io.
Za manokana moa dia sendrasendra no nandehanako tao fa hitako milay. Ny antony tena nametrahako an'le izy eto (plus an'le hoe tagy mafinaritra izany) dia mba hampifalifaliana an'ilay olona (sa ireo olona maromaro?) milaza fa "fake" be ny valiny nataoko t@ ilay quizz tao @ fesse iny hoe How well do you know xxx?? dia izay, io ny valiny ny test. Tandremo soa mbola 10% eo ihany @ quizz manaraka
(*) mila misoratra anarana vao afaka manao an'le test. Azo adika @ GooGle translate, jereo eto, ho teny frantsay raha ilaina.
ps: tsy nahita titra ah dia feo ana telefona vibrera no lasa titra zzzzzzzzzzzzzzzzz
08/15,2009 Sokajy Rediredy